Chart Types - Best Forex EA si | Expert etozu | FX ígwè ọrụ
HomeForex Schoolchaatị Ụdị
Chaatị dị iche iche ibé na price ije nke a ego ụzọ n'elu time.The x axis nwere oge increments Ịba ekpe gaa n'aka nri.
The y axis nwere price increments amụba ala top.Charts na-eji na-esochi nke ugbu a ahịa na-eme nnyocha na-akụkọ ihe mere eme nke a ụzọ na-price movement.There atọ ụdị chaatị dị iche iche ji na Forex: Akara chaatị, mmanya chaatị, na ihe ndọba oriọna chaatị. N'ihi atụ na tụnyere, anyị ga-edo anya, ọ bụla ụdị na chaatị dị na EUR / USD oge nke June 2010 site July 2010.
Ihe ndị kasị mkpa nke atọ chaatị dị iche iche bụ akara chaatị n'ihi na ọ na-anọchi anya na mmechi ahịa n'elu a set oge. The akara na-kpụrụ site na njikọ mmechi ahịa n'elu etiti oge. Ụfọdụ nwere ike amasị maka akara chaatị maka ya mfe. Otú ọ dị, ọ na-adịghị ná egosi visual ọmụma nke trading nso, dị ka elu, ala, na oghere.
ihe Nlereanya nke Line Chart on EURUSD Daily:
Dị ka ị pụrụ ịhụ, akara chaatị dị iche iche na-egosi mmechi price ije naanị.
A ibé esịnede a usoro nke kwụ ọtọ, onye ọ bụla na-anọchi anya price nso n'oge a kwuru kpọmkwem oge na oge, onye ọ bụla vetikal akara nwere obere kwụ n'ahịrị ejikọta na ya ekpe, na-egosi na oghere price maka na oge, na a obere kwụ n'ahịrị ejikọta on ya nri, na-egosi mmechi price maka na oge.
Ihe Nlereanya nke Bar Chart na EURUSD Daily:
Ka anyị leba anya n'otu n'otu ụlọ mmanya ndị ọzọ zuru ezu:
Dị ka otu onye pụrụ ịhụ, na otu mmanya nke a Bar Chart egosi dum price ije: oghere price (kwụ mmanya na-ekpe n'akụkụ), nso (kwụ mmanya na n'akụkụ aka nri), highs (na ndọtị na-emeghe windo), na ala (na ndọtị mmechi mmanya price).
A ibé esịnede a usoro nke oké kwụ ọtọ ( "kandụl"), acha na-egosi a ala ma ọ bụ elu nso tụnyere gara aga oriọna, na-anọchi anya price nso, elu price, na ala price maka etiti oge ya represents.Example of idọba Chart na EURUSD Daily:
Ma ndị Bar chaatị na-idọba-oriọna chaatị nwee otu Ama; Otú ọ dị, ihe ndọba oriọna bụ mfe na-agụ.
Idọba Chart egosi price ije, na-emechi ahịa, na-emeghe ahịa, & highs na lows n'ihi na a nyere oge eku. Na elu na ala nke ahụ ahụ na-ekpughe na-emeghe ma na-emechi, na oriọna na mgbe n'elu na-egosi na elu, na oriọna na n'okpuru ala na-egosi na ala. Anyị ga-egosi ihe atụ nke idọba-oriọna na chaatị nakawa etu esi n'okpuru Japanese idọba-oriọna.
N'ihi na a ntụle zuru ezu nke idọba-oriọna na ha nakawa etu esi, biko rụtụ aka na anyị isiokwu idọba nakawa etu esi.
Ọkọlọtọ unit nke oge tụrụ a chart. Na MT4 na chaatị oge osisi ndị M1 (1 nkeji), M5 (5 nkeji), M15 (15 nkeji), M30 (30 nkeji), H1 (hour obula), H4 (4 Hour), D1 (Daily), W1 (Weekly ), na MN (Monthly). The 5 nkeji ndọba oriọna chaatị pụtara na onye ọ bụla-idọba-oriọna na-egosi na price nso na mere n'oge 5 nkeji nke trading, n'oge depụtara na x axis nke chaatị.